Faallo:Nimanka ka hadaaqay Buuhoodle iyo Laascaanood masuuliyada dhibka Telesom masuul ma ka yihiin? | | Horufadhi Online
Faallo:Nimanka ka hadaaqay Buuhoodle iyo Laascaanood masuuliyada dhibka Telesom masuul ma ka yihiin?
Waxaa maalmaha idaacadaha la iska arko ee TV-yada ka soo baxay niman bal-balaadhan oo aan weligood badankooda hore loo arag,maantase banaanka isa soo dhigay waxay dhuuntaanba,waxaana nimankaasi ay sheegteen inay yihiin rag dhaqaale ka hela shirkada Telesom , oo ah shirkad dhib iyo tacadi aan qoraal lagu soo koobi Karin u geysata ,hadana ku haysa shacabka Soomaaliyeed khaas ahaan shacabka Khaatumo Staet ee ku dhaqan gobolada SSC ee shirkadaasi ka hawlgasho.
Hadaba akhristoow hadaan hoos u eegno dhibka iyo tacadiga ay shirkada Telesom u geysatey shacabka khaatumo waxaan ka soo qaadan karnaa dhowkan qodob.
Ugu horeyn waxay shirkadan oo ah shirkad dhaqaale badan ka hesha deegaanada Khaatumo oo boqolaal siim(Aerials), uga taagan yihiin tuulo kasta iyo buur walba,ayaa wakhtiyada ay jabhada SNM ciidamadeedu weerarada qaadayaan waxay damisaa dhamaan isgaadhsiinta, sida Taleefoonada iyo Internetka, waxaana amarkaas siiya ninka madaxda u ah ciidanka Somaliland,waxayna hadawa ku soo noqotaa,marka ninkaasi amro,taasoo meel ku dhac ku ah macaamiisha shirkad kula heshiiyey inay adeegooda helaan wakhti walba.
Dhibaatada labaad ee aan soo qaadan karno waxa ka mid ah waxay shirkadani siisaa maamulka Somaliland malaayiin lacag cashuur ah,lacagtaas oo ah lacagta loo adeegsado in lagu hasto,laguna weeraro deegaamada Khaatumo,waxaana dhaqaalaha dhib loogu geystaa kumanaan shacab ah oo ka mid ah macaamiisha shirkadaas.
Waxaa kaloo ka mid ah tacadiyada Shirkada Telsom,waxaa shirkadani ay hawlaheeda ama shaqada ay doonto iska wadataa iyadoon ogolaansho ama wax heshiis ah la gelin maamulka Khaatumo oo ah maamul ay samaysteen dadka deegaanada SSC, maamulkaas oo in badan ka digay in ogolaansho ay dhamaan shirkadaha ka hawlgala deegaamada Khaatumo ay soo weydiistaan maamulka Khaatumo ayna si sahlan ku heli karaan ogolaansho ay kaga shaqeeyaan deegaanada Khaatumo arintaas oo ay ka dhego adeegeen.
Waxaa kaloo ka mid dhibka ay u gaysato shirkada Telsom dadka reer Khaatumo,iyada oo qayb weyn ka qaadata maalinta ay ku sheegeen inay soomaaliya ka go’een ee 18 May,iyadoo subaxnimada maalinkaas qof kasta oo reer Khaatumo ay u soo diraan fariin ah “HANBALYO SANADGUURADA 18 MAY EE SOMALILAND”,taasoo naxdin iyo argagax ku keenta dadka xalaasha ah ee Soomaaliyeed ee aan ogolayn maalintaa ,oo haday u soo diri lahaayeen Hanbalyo Maalinta Qashinka ay sax ahaan lahayd,balse ay sidaas u samaynayaan si ay u bahdilaan dadka reer Khaatumo.
Waxaa shirkadaasi ay maalinta 18 may u bilaash uga dhigtaa dhamaan saxaafada sida tooska ah u soo tabiya xafladaha SNM,iyagoo lacago badan ku bixiyaa damaashaadka maalinkaas,oo ay qaybta uga weyn ka qaataan. Taasoo ah meel ka dhac qaranimada Soomaaliyeed, maxkamadna lagu soo taagi karo xubnahaas Mustaqbalka khiyaanada qaran ee fududaynta iyo koolkoolinta kala goynta dalkeena Soomaaliya.
Waxaa ugu danbeeyey tacadiyada ay shirkadaasi u gaysatey dadka Soomaaliyeed,iyada oo khasab kaga dhigtay macaamiishii lacagta doolarka ah ku shuban jirey Zaadka ama taleefoona lacagta lagu qaato,inay ku shubtaan lacagta Somaliland ,oo ujeedadu tahay sidii dadka Khaatumo ama dhamaan dadka Soomaaliyeed kadib markay diideen lacagta SNM inay khasab ama si dadban ku qaataan,iyagoo ku shubanaya taleefoonada ,oo lacagtii doolarka lagaga bedesho Lacaga SNM.
Waxay mar walba taleefoonada ka jaraan ama dhegeystaan madaxda khaatumo ,khaas ahaan kuwa ku sugan Saaxdheer,iyaga oo marba cilad been ah sheega. Waxa xusuus mudan in duulaankii Widhwidh iyo Balihadhac ay joojiyeen ama gooyeen khadka, ayado maalintaa lafteeda Buuhoodle dagaal dhabarjabin ah ku soo qaadeen maleeshiyo u dhalatay beesha Isaaq balse gashanaa dhar Liyuu Boolis Itoobiya ah. Taasoo keentay in shacabka Buuhoodle xabad xabad u bur buriyaan qalabkii iyo xaruntooda Buuhodle.
Hadaba intaas iyo boqolaal tacadi oo kale oo aan halkan lagu soo koobi Karin ayay shirkadaasi ka gashay shacabka Khaatumo,markaa markii uu maamulka Khaatumo in badan ka digayey in shirkadaasi ay joojiso dhibaatooyinka ay ku hayso umada reer Khaatumo oo madaxda sare in badan u digayeen,ayaa waxa waxyeelo la gaadhsiiyey xarumo ay shirkadaasi ku lahayd Horufadhi iyo Banyaal oo ka mid ah deegaanada ay ka taliso maamulka Khaatumo.
Waxaa hadaba si lama filaan ah Tv-ga Buuhoodle laga soo duubay odayo aan hore loo arki jirin oo u ekaa niman ladan oo buur buuran,kuwaasoo sheegtay inay lacag kaga jirto shirkada Telesom, ayna lacagtooda ka rabaan beelaha ay ka soo jeedaan qaar ka mid ah madaxda sare ee Khaatumo.
Hadaba hadii ay sheegteen in lacag ka khasaartay ,oo aan siiyo,ma bixinayaan dhibaatooyinka ay Telesom umada u geysatey dhaqaalaha ku burburay iyo boqolaalka qof ee lagu laayey lacagta shirkadaas,iyo bahdilka iyo barakicinta maamulka SNM ku sameeyo,iyo dhibaatooyinka kale ee shirkaasi samayso masuuliyadeeda ma qaadayaan,mise marka ama gaadhi laga qaato ama mid laga gubo ayay odayaashaasi beelaha walaalahoodu u hanjabi doonaan.
Odayaal kuwaas la mid ah ayaa iyana ka soo baxay shaashada,iyagoo sidaas oo kale hanjabaad ay shirkada Telesom ugu talo gashay in waxa shirkadaas iyo maamulka Khaatumio ka dhexeeya loo bedelo qaab qabiil oo la iska hor keeno beelaha walaalaha ah ee Khaatumo,oo shirkad yar alaab laga gubay beelo dhan loogu hanjabo,iyadoo maalin walba Laascaanood iyo Buuhoodle ay ka dhacaan dilal iyo barakicin lagu hayo umada oo aan aan la hayan oday ka dhiidhiya ama Sheekh ka hadla dhibka dadkooda ama iyaga laftigooda lagu hayo,oo ay odayaasha Laascaanood ka hadaaqay ay arkaana iyada oo hooyooyinkood,iyo hablahooda Mandheera loo dhaadhiciyo ,maalin walba maydad wiilal ay adeero u yihiin laga keeno Hawdka Laascaanood,oo ay daawadaan tiknikada iyo cadowga weeraraya deegaamada ay ku nool yihiin dadka reer Khaatumo ee Xalaasha ah.
Hadaba waxaa muhiim ah in maamulka Khaatumo go’aan midaysan ka qaato arinkan oo ay ceeb ku tahay inay kala hadlaan ,oo qaarna amar bixiyaan,qaarna raali gelin bixiyaan,oo ay gacan bir ah ku qabtaan shirkadaha naaxiniya cadowga,isla markaana aanay dheg jalaq u siin oday koofiyad bacle xun oo la adeegsanayo,oo la soo toosinaya si uu u difaaco cadowga ,umada dhib dhexdooda ka abuuro.
Qore:Abdi Hakiim Diiriye Jaamac
C ontact hakiimd@hotmail.co.uk
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=1911
4 Comments for “Faallo:Nimanka ka hadaaqay Buuhoodle iyo Laascaanood masuuliyada dhibka Telesom masuul ma ka yihiin?”
June 27, 2015 - 5:28 am
ssc maxaa mashiir munaafaqadeed kusoosicdat ilaawaayobadan war wasiir gacmayare iyo madaxweyne cagalule miyaalamooday ?????? inay cidla yihiin ramadaan habaxdo kuwa calool sideyaashoow kafantiinana seen toogashta ama samtel beershiil baakatalindoona dhulka khaatumostd ama khaatumostd iyo dadkeeda iyo dawladeeda aydoorten baa nootalindoona dabadhilifyo dsbsdhilifyo dhalay ooinan gumeedaa waakamaaranaa
June 27, 2015 - 6:09 am
Waxaan hubaa in mar kasta oo somaliland weerar ku qaado khaatumo lagooyo
isgaadhsiinta carro dhulbahante. Taana macneheedu waxa weeye in shirkadaha isgaadhsiintu ka war helaan in weerar la qaadayo.
Haddaba sidaad u aamini isgaadhsiin cadawgaagu maamulo oo kula joogta. Shaki kuma jiro in ay dhegaystaan taleefannada oo
horaybaa si cad oo documented ah laynoogu sheegay. Ragga hadlayna weligood goob dagaal may tegin markii Buuhoodle lasoo weeraray.Arrintan waxaa fiican in qurbajoogtu wax ka qabtsaan oo la sameeyo shirkado aynu leenahay
ama contract lasiiyo shirksdo kale oo aan csdawgu maamulin .
June 27, 2015 - 6:12 am
June 27, 2015 - 5:45 pm
dad badan baa daaha gadaashiisa ka soo baxay ragiii dhawaan maddax khatumo u han jabayey waa la ogaa lkn shacabkoow arag baa ka dhacdaay waxa soomaalilan u shaqeeya